Doogee V20: qiimaha iyo taariikhda la sii daayo | Qalabka Wararka
Qolka Ignatius | 13/01/2022 08:56 | Mobiles
Mid ka mid ah shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah ee xoogga saaray dhaqdhaqaaqooda talefannada casriga ah ee casriga ah waa Doogee, oo ah soo saaraha kaas oo sannad kasta soo saara qalab kala duwan oo loogu talagalay dhammaan jeebadaha oo sidaas darteed daboolo baahida tiro badan oo isticmaalayaasha ah.
Soo saaraha ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqay terminalka cusub Waxaan ka hadleynaa Dodge V20, Terminal uu soo saarahani rabo in uu isu dhigo sidii a tixraac berrinka casriga ah ee rafaadka ah, ma aha oo kaliya caabbinta laakiin sidoo kale waxqabadkeeda sare.
Haddii aad raadinayso casriga casriga ah oo soo saaraha Doogee uu ka mid yahay noocyada loo tixgeliyo ikhtiyaar ahaan, markaa waan ku tusi doonaa dhammaan sifooyinka Doogee V20 cusub.
1 Tilmaamaha Doogee V20
3 Bandhig AMOLED
4 3 kamaradood xaalad kasta
5 U adkaysta dhammaan noocyada naxdinta leh
6 Batteriga 2 maalin
7 Midabada, helitaanka iyo qiimaha Doogee V20
Tilmaamaha Doogee V20
Gacaliye 8 cores oo leh 5G chip
Xusuusta RAM 8GB LPDDR4x
Kaydinta 266 GB UFS 2.2 - la ballaarin karo ilaa 512 GB oo leh kaarka microSD
Shaashadda Weyn 6.4-inch AMOLED ay samaysay Samsung - Qaraarka 2400 x 1080 - Saamiga 20: 9 - 409 DPI - Isbarbardhigga 1: 80000 - 90 Hz
Bandhig labaad Waxay ku taal xagga dambe ee ku xigta moduleka sawirka leh 1.05 inji
Kaamirooyinka gadaal 64 MP dareemaha ugu weyn oo leh Sirdoonka Artificial - HDR - Qaabka habeenkii
20 MP dareeme aragga habeenkii
8 MP Ultra Wide xagal
Shahaadooyinka IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
Ku dhufoa 6.000 mAh - Waxay taageertaa ku dallacaadda degdegga ah ee 33W - Waxay taageertaa ku dallacaadda 15W wireless
Waxyaalaha sanduuqa ku jira 33W xeedho - USB-C fiilada ku dallaca - Buugga tilmaanta - Ilaalinta shaashadda
Haddii aadan sida caadiga ah dib u cusboonaysiin taleefankaaga casriga ah sannad kasta, waa inaad bilowdaa inaad tixgeliso suurtogalnimada dooro qaabka 5G
In kasta oo ay wali wax yar ka harsan tahay ka hor inta aan shabakadaha 5G laga heli karin Spain oo dhan iyo dibadda, helitaanka talefan casriga ah sida Doogee V20 5G ayaa kuu oggolaan doontaKu raaxayso xawaaraha intarneedka ugu badan ee qalabkaaga sanadaha soo socda.
Doogee V20 waxaa maamula a 8 processor muhiim ah, oo ay la socoto 8 GB ee RAM nooca LPDDR4X si ay ciyaaraha iyo codsiyada u socdaan xawaaraha ugu badan ee suurtogalka ah.
Xagga kaydinta, mid kale oo ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan maanta marka la iibsanayo taleefannada casriga ah, oo leh Doogee V20 ka tagi mayno, maadaama ay ku jirto 256 GB oo ah nooca booska UFS 2.2. Haddii ay gaaban tahay, waxaad ku ballaarin kartaa booska kaadhka microSD ilaa ugu badnaan 512 GB.
Gudaha Doogee V20, waxaan ka heleynaa Android 11, kaas oo noo ogolaan doona in aan ku rakibno codsi kasta oo laga heli karo Play Store.
Nooca Android ee laga heli karo Doogee V20 waxaa ku jira a lakabka beddelka ugu yar, Markaa dhib ma noqon doonto in aad si fiican uga faa'iidaysato iyada oo aan la dhibin codsiyada ay soosaarayaashu inta badan rakibaan iyo in, inta badan, qofna ma isticmaalo.
Maaddaama qiimaha shaashadaha ee tignoolajiyada OLED ay noqdeen kuwa caan ah, qof kastaa wuxuu jeclaan lahaa inuu ku raaxeysto tayada ay na siiso. Doogee V20 waxaa ku jira a Shaashada nooca AMOLED ee ay samaysay Samsung (shirkada ugu weyn ee soo saarta shaashadaha mobilada ee aduunka).
Shaashadu waxay gaadhaysaa 6,43 inji oo leh xallinta 2400 × 1080 pixels, dhalaalka 500 nits iyo ka soo horjeeda 80000: 1, cufnaanta pixel ee 409 iyo daboolka midabka 105% ee gamut NTSC.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a 90 Hz heerka cusbooneysiinta. Waad ku mahadsan tahay heerkan soo kicinta ee sarreeya, labada ciyaarood ee leh codsiyada iyo daalacashada webka waxay tusi doonaan hagitaan dheecaan badan marka aan isticmaalno.
Shaashadda hore ee qalabkan ma aha ka kaliya ee ay ku jiraan, tan iyo dhabarka, waxaan sidoo kale dooneynaa inaan helno shaashad 1,05-inji ah oo ku taal dhabarka, oo kaliya dhanka midig ee moduleka kamarada.
Shaashada yar-yar waxa lagu habayn karaa naqshado kala duwan oo saacaddo ah si ay u muujiso wakhtiga, batteriga ... fiiri ogeysiisyada iyo xasuusinta… Haddii inta badan aad haysato teleefanka oo muraayaddu ay hoos ugu dhacday miiskaaga, shaashadda noocaan ah ayaa adiga kugu habboon.
3 kamaradood xaalad kasta
Sida aan kor ku soo sheegay, dhabarka dambe ee Doogee V20, waxaan ka helnay a module sawir oo ka kooban 3 kamaradood, kamaradaha aan ku dabooli karno si dhab ah baahi kasta oo aan u qabno mar walba, hadday bannaanka, gudaha, habeenkii...
64 MP dareeraha ugu weyn oo leh garaad macmal ah. Waxay leedahay dalool f/1,8 ah iyo zoom indhaha ah ee X.
Kaamirada 20 MP habeenkii vision taas oo noo ogolaanaysa inaan sawiro iyo muuqaalo ka qaadno gudcurka (waxay u shaqeysaa sida kamarad kasta oo amniga ah).
8 MP xagal ballaadhan taas oo ina siinaysa xagal daawasho ah oo ah 130 digrii, oo ku habboon sawirista taallooyin, kooxo dad ah, gudaha...
La doogee v20 camera hore Waxay leedahay xallinta 16 MP.
U adkaysta dhammaan noocyada naxdinta leh
Haddii aad raadinayso casriga casriga ah ee adag u adkaysta dhammaan noocyada kala duwan ee bay'ada iyo naxdinta iyada oo aan laga tanaasulin tignoolajiyada ugu casrisan, Doogee V20 waa talefanka casriga ah ee aad raadinayso.
Doogee V20 kaliya ma haysto Shahaadooyinka IP68 iyo IP69K caadiga ah, laakiin sidoo kale waxaa ku jira shahaado darajo ciidan, MIL-STD-810.
Shahaadadani kama hortagayso kaliya wax raad ah oo boodh ama biyo ah inay soo galaan qalabkeena, laakiin sidoo kale way dhici doontaa waxay ka ilaalisaa aaladda isbeddellada degdega ah ee heerkulka.
Batteriga 2 maalin
Batteriga aan ka helno gudaha Doogee V20 ayaa gaaraya 6.000 Mah, awood noo ogolaanaysa in aan si joogto ah ugu raaxaysan qalabkan 2 ama 3 maalmood.
Intaa waxaa dheer, waa la jaan qaadi kara 33W lacag deg deg ah iyada oo loo marayo dekedda USB-C. Waxa kale oo ay taageertaa dallacaadda wireless-ka 15W.
Midabada, helitaanka iyo qiimaha Doogee V20
Doogee V20 ayaa suuqa soo gali doona 21-ka Febraayo wuxuuna ku samayn doonaa 3 midab: Knight madow, cas Khamrigu y Phantom cawl iyo 2 nooc oo dhammaystir ah: fiber carbon iyo matte finish.
para u dabaal dago furitaanka suuqa Doogee V20, soo saaraha ayaa bixiya iib 1.000 ka cutub ee ugu horreeya oo qiimo dhimis ah 100 dollar qiimihiisii ​​caadiga ahaa, isagoo qiimihiisu yahay 299 dollars.
El qiimaha caadiga ah ee terminaalkan, marka xayaysiisku dhamaado waa 399 dollar.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Doogee V20: qiimaha iyo taariikhda la sii daayo